FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA BERA KARELIAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana bera Karelian
'Harley no sary tonga lafatra KBD. Energie, milalao, be fitiavana nefa tsy diso fa ity dia Dog Dog izay miaina mifanaraka amin'ny anarany 110%, raha ny momba ny biby kely, squirrels, bitro, saka sns sns sns. Ny tena toetrany dia mipoitra sy 60lbs? mahatsiaro ho 200lbs, rehefa manandrana misakana azy ianao. Ny endrika iray an'ny Doge Karelian Bear mbola tsy noresahana hatrizay dia ny fitiavany rano na an'i Harley farafaharatsiny. Izy no alika anaty rano indrindra hitako, mandany ora maro amin'ny renirano sy farihy ary tiany ny sambo sy ny jono. Nolazaina taminay fa izy no alika tsara indrindra sy ratsy toetra efa nifankahita. Taorian'ny fotoam-pankatoavana roa, ary dia an-tongotra 3 ora isan'andro, orana na namiratra, tamin'ny toetrandro tena tsara na ratsy indrindra, dia nifanaraka tamin'ny fiainana an-tanàna i Harley. Mendri-pitokisana amin'ny olona sy ny ankizy izy dia lehilahy mendri-kaja sy mpiaro ao amin'ny valan'alika. Mianatra haingana izy, ary matetika mieritreritra ny lalany amin'ny toe-javatra maro. Tsy afaka mieritreritra namana tsara kokoa ho anay izahay sy i Shannon vadiko. '
Alika bera Karelianina
Ny Dog Karelian Bear Dog dia misy sofina kely izay voahodina ary manondro kely ivelany. Izy ireo dia nopetahany volo matevina, mampihena ny mety hisian'ny fanala. Ny palitao fohy toetr'andro dia misy volo mahitsy sy henjana raha malefaka sy matevina ny sosona ambaniny. Rakotra volo matevina ny feny. Tahaka ny Russo-European Laika, ny karazany dia manana palitao mainty sy fotsy miavaka, izay tsy mahazatra an'ny alika karazana Spitz. Ny loko varahina dia mahazatra. Ny sombintsombin'ny mainty ao amin'ny fotsy dia heverina ho lesoka. Ny alika dia tokony ho mainty voalohany misy marika fotsy, izay miavaka ary mitranga amin'ny lohany, tendany, tratra, kibony sy tongotra. Mahery vaika ny valanoranony. Lava ny rambony. Mampiseho fifantohana mafy ny maso kely. Ny rambony dia miforitra ao aoriana ao amin'ny andohalambo Spitz mahazatra. Niorina mafy, tsara volony ary antonony ny habeny, ny Karelian Bear Dog dia lava kokoa noho izy lava. Ny lohany dia miendrika volo mihombo. Matanjaka ny vatana ary mivoatra tsara ny lamosina.
Ny Dog Karelian Bear Dog dia mahatsikaiky mahatsikaiky. Izy io dia mora tohina, mahaleo tena, manan-tsaina, mahay, henjana amin'ny tenany ary mahery. Alika matanjaka, maharitra ary matanjaka, vonona ny hitondra biby lalao rehetra. Ity alika ity dia tena mahatoky amin'ny fianakavian'ny tompony ary manao namana mpiara-miasa tsara rehefa manana tompona mahalala ny fomba maneho fahaiza-mitarika ary ny alika dia voaofana be dia be . Tsy karazany ho an'ny tompona biby fiompy mahazatra ny Karelian Bear Dog izay mpihaza fahasahian-tena sy fahavonona. Hametraka orsa hanidina na hanafika azy amin'ny fahatezerana lehibe io. Ilay mpihaza sy mpihaza marina any ivelany dia afaka mijery ity karazany miasa mafy ity miaraka amin'ny fahafinaretana sy fahafaham-po tanteraka. Ny tompon-trano dia tsy maintsy mahay mandray an'io canine mahery io. Tompony mahatakatra fihetsika canine , ahoana no mampita amin'ny fampisehoana fahefana amin'ny alika, fiofanana mety SY -piaraha-monina dia mozika tanteraka. Mety hanandrana izany hanjaka alika hafa ary vonona hiady tanteraka. Ny tompona dia tokony hampita izany dia tsy fitondran-tena ekena. Mila mpikarakara manana fahefana voajanahary ity alika ity. Ny fiofanana dia tokony hifanaraka amin'ny tanana hentitra sy ny fitiavana. Tsy karazany ho an'ny tompona alika tsy za-draharaha io. Izy ireo dia be fitiavana amin'ny olona ary hanambara ny mpitsidika mandray sy tsy ankasitrahana. Ireo mpitsidika fantatry ny alika dia handray an-jotom-po fa ny vahiny kosa mety hotsaboina mangatsiaka. Tena miaro ity karazana ity. Hiaro anao amin'ny ainy izy ireo. Ny Karelian Bear Dog dia afaka miaina miaraka amin'ny biby hafa ao an-trano raha fantatr'izy ireo hoe aiza no misy ny toerany ao anaty fonosany (ambanin'ny hafa rehetra) ary raha toa ka tantana tsara ny fiofanana sy ny fiaraha-monina. Ity karazana ity dia manana filan-kely kely amin'ny habeny.
Ohatrinona ny Cocker spaniel hilanja
Hahavony: 19 - 23 santimetatra (48 - 58 cm)
Milanja: 44 - 50 pounds (20 - 23 kg)
Ity dia karazana salama tsara.
Ny Karelian Bear Dog dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tokony hanana acreage na toeram-pambolena mba hahafahany mihazakazaka. Ireo biby ireo dia tsy tia atao voafetra. Izy ireo dia azo tazonina ao anaty trano kennel any ivelany raha mbola manana fotoana be mihazakazaka izy ireo.
Ny Karelian Bear Dog dia alika matanjaka be. Tokony hampiasaina amin'ny haingam-pandeha izy io MANDEHANA adiny iray isan'andro farafahakeliny. Raha azonao atao ny mitazona tsara ity alika ity dia hankafy ny fanatanjahan-tena amin'ny fihazakazahana miaraka amin'ny bisikileta. Raha tsy ampy ny fanatanjahan-tena dia ho leo sy mety ho manimba ao an-trano . Aza avela mihazakazaka miaraka afaka ny alika roa karelianina: fa handeha hihaza izy ireo. Alao antoka fa voafefy tsara ny tokotaninao mba tsy hifindra amin'ny hazalambo mihaza ny Karelian Bear Dog.
heeler mena mainty laboratoara Mix
Mora ny mikarakara ny palitao amin'ny toetrandro rehetra, tsy mila fitandremana kely fotsiny. Mampiasà metaly rehefa alatsaka ny alika mba hanesorana mora ny volony very avy ao anaty palitao. Toy ny alika Arctic hafa, ny Karelian Bear Dog dia tsy manana fofona doggie. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ilay faritra fantatra amin'ny anarana hoe Karelia any avaratr'i Eropa dia feno canine mihaza mihantona sy be lalao hatrany. Efa ela ny alika mitovy amin'izany no nompiana tany Karelia satria nihaza lalao lehibe. Ireo alika ireo dia fantatra fa nanaraka ireo mpivahiny voalohany tany Failandy an'arivony taona maro lasa izay. Ireo foko olona voalohany ireo dia tafavoaka tamin'ny zavatra azony hazaza, ka izany no antony maha-zava-dehibe ny alika izay mafy hatoka, be herim-po ary henjana hiatrehana bera, amboadia sy lynx. Ny Dog Karelian Bear Dog dia mitovy amin'ny Laika Russo-European. Nivoatra izy io tany amin'ny faritr'i Failandy notakian'ny Firaisana Sovietika tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-20. Ny Karelian Bear Dog, izay betsaka kokoa ivelan'ny fireneny manokana noho ny an'ny Laika Rosiana rehetra, dia ampiasain'ny mpihaza elk manerana an'i Failandy, Suède ary Norvezy. Naseho voalohany tamin'ny fampisehoana alika tao Helsinki izany tamin'ny 1936, saingy taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia saika nanjary ilay karazany lany tamingana . Ny karelianina maoderina rehetra dia avy amin'ny alika efa-polo hita sy voavonjy taorian'ny ady. Ny Dog Karelian Bear Dog dia nalaza be tamin'ny fiandohan'ny taonjato rehefa hita izany amin'ny isa marobe. Nihena ny isany tamin'ny taona 1960, saingy nitombo ny lazany ary any Amerika Avaratra sy any amin'ny firenena eropeana maro no itomboany ankehitriny. Anisan'ny lalaon'ity mpihaza mazoto ity ny volom-boal, boar dia, bitro ary moose. Tsy matahotra ihany koa izy hiady amin'ny amboadia sy ny bera ary noho izany dia niasa ho mpiaro izy tamin'ny alàlan'ny fihazana ireo biby dia. Any amin'ny tanindrazany Failandy, ny alika dia ampiasaina amin'ny elk ary matetika no alika mpihaza lalao lehibe teratany.
McKinley the Dog Karelian Bear at herintaona
Zeus ilay alika orsa karelianina 10 taona
'Ny alikako Zeus ao anatin'ny 10 volana — toetra lavorary, fihetsehana lehibe, firafitra manaitra ny fiainany feno hafaliana. Karazan-tsakafo tena ambany tokoa, saingy hiova izany. '
Alika orsa Karelian, Bayka ary Vista
Rio ilay alika orza karelianina
Lora the Dog of Karelian Bear at 1 taona
McKinley the Dog Karelian Bear Dog toy ny alika kely amin'ny 3 volana mitafy satroka Santa— 'Milalao izy, malina ary liana be.'
McKinley the Dog Karelian Bear toy ny alika kely amin'ny 5 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny Karelian Bear Dog
Sarin'alika alika karelianina 1
sarin'ny alika shitzu
fifangaroana chihuahua dachshund lava volo